Carrots, Eggs, and Coffee | အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Posted on 20 July 2012 by lettwebaw
“အတ္တကျော်”ဆိုတဲ့ ကလောင်တစ်ချောင်းကို စတင်မွေးဖွားခဲ့တာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ အလင်းတန်းဂျာနယ်ပါ “ခင်မင်မှု သံမှိုများ” စာမူနဲ့ပါ။ အဲဒီ့စာမူက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေတစ်ဦး ကျွန်တော့်ဆီကို လှမ်းပို့မျှဝေတဲ့ အီးမေး(လ်) ဓာတ်ချောစာထဲက အကြောင်းအရာလေး ကောင်းလွန်းလို့ ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ စာမူပါပဲ။ အဲဒီ့ကလောင်နဲ့ အဲလို ဘာသာပြန်လေးတွေ မပြတ်ရေးဖြစ်ရင်းက အတ္တကျော်ရယ်လို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီ့ဘာသာပြန်လေးတွေ အပုဒ် ၃၀ ပြည့်တဲ့အခါမှာတော့ “နေပျော်တဲ့ဘ၀ ကြည်မြတဲ့ဘ၀င် ရွှင်လန်းတဲ့စိတ် (မောဟပြေပုံတိုပတ်စများ)”ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ၂၀၀၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ ထုတ်ဝေလိုက်ရင်း “လက်တွဲဖော်”စာအုပ်တိုက်ကိုလည်း စတင် ထူထောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆို အတ္တကျော်ရဲ့ ကလောင်သက်က တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်ကျော် တစ်ဆယ့်သုံးနှစ်ထဲကို ၀င်လာပြီဖြစ်သလို လက်တွဲဖော် စာအုပ်တိုက်ရဲ့ သက်တမ်းဟာ ဆယ်နှစ် တင်းတင်းပြည့်တော့မှာပေါ့။ အဲဒီ့စာအုပ်က ထွက်ထွက်ချင်းပဲ ၀က်ဝက်ကွဲ အောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်ထုတ်ဖြစ်တဲ့ အထိပါပဲ။ (အဲဒီ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကို ebook အနေနဲ့ ဖတ်ရှုလိုပါရင် Naybyaw Ebook မှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။)
အခုတော့ အဲဒီ့ စာမူတွေရဲ့ သက်တမ်းက ၁၂ နှစ်ထဲကို ချင်းနင်း ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သလို စာအုပ်ရဲ့ သက်တမ်းကလည်း ၁၀ နှစ်ရှိခဲ့ပြီမို့ ပရိသတ်က မေ့လျော့ကုန်ကြပုံပါပဲ။ သည်စာမူတွေကိုပဲ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တခြားပုံစံတွေနဲ့ ဘာသာပြန်ပြီး တင်လာတာ တွေ့ရတဲ့အခါ ကျွန်တော့် စာမူလေးတွေကို ပြန်သတိရသွားမိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အတွေးသစ်ဂျာနယ်မှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ နှစ်နဲ့ တစ်လ ကျော်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စာမူလေးကို ပြန်အစဖော်လိုက်ရကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
လူမုန်လာဥ၊ လူကြက်ဥနဲ့ လူလက်ဖက်ခြောက်
တစ်ခါက ဤမဟာဘဒ္ဒကမ္ဘာရဲ့တစ်နေရာမှာ သားအဖနှစ်ယောက် ရှိလေသတဲ့…
တစ်နေ့မှာ သမီးလုပ်တဲ့သူက ဖအေကိုတိုင်တည်တယ်။ သူ့ဘဝမှာ အဆင်မပြေတာတွေက များနေတယ်ပေါ့။ ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေတာတွေချည်းမို့ အားက ပျက်နေပြီး အရာရာကို လက်လျှော့လိုက်ချင်စိတ်က ပေါက်နေပြီ ဖေဖေရယ်၊ တိုက်ရ ခိုက်ရတာ၊ ရုန်းရ ကန်ရတာလည်း သမီးမှာ မောလှပါပြီ၊ ပန်းလှပါပြီရှင်။ ပြဿနာတစ်ခု ပြေလည်သွားလို့မှ မနားရသေးဘူး၊ နောက်ထပ် ပြဿနာတစ်ခုက ထပ်တက်လာနဲ့၊ ဘဝဆိုတာ ဒုက္ခတွင်းကြီးထဲ စောက်ထိုး ဆင်းနေရသလိုပါပဲ ဖေဖေရယ်၊ သမီးတော့ စိတ်ညစ်တယ်၊ လူတောင် ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူး ဘာညာစသဖြင့် ဖအေကို တိုင်တည်ရင်း ညည်းရှာတယ်။
သမီးကလည်း အဲသလို ညည်းညူတို င်တည်လာရော ဖအေက ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ သမီးကို လက်ဆွဲပြီး မီးဖိုချောင်ထဲ ခေါ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အိုးသုံးလုံးထဲကို ရေတွေ ဖြည့်ပြီး မီးပြင်းပြင်းနဲ့ ဖိုသုံးဖိုပေါ်မှာ တည်လိုက်တယ်။ မကြာပါဘူး၊ မီးတွေက ပြင်းတော့ သုံးအိုးစလုံးထဲက ရေတွေ ပွက်ပွက်ဆူလာတော့တာပေါ့။
ရေနွေးလည်းဆူရော ဖအေလုပ်တဲ့သူက တစ်အိုးထဲကို မုန်လာဥတွေ ထည့်၊ နောက်တစ်အိုးထဲကို ကြက်ဥတွေထည့်၊ နောက်တစ်အိုးထဲကို ကျတော့ လက်ဖက်ခြောက်တွေ ထည့်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အိုးတွေကို သည်တိုင်း ဆက်တည်ထားလိုက်တယ်။ စကားတော့ တစ်လုံးမှမပြောဘူး။
သမီးလုပ်တဲ့သူက ဖေဖေ့နှယ် ဘာတွေများ လုပ်နေပြန်တာလဲလို့ တွေးရင်း စိတ်က တယ်မရှည်ချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာကိုမဆို အကြောင်းမဲ့ မလုပ်တတ်တဲ့ ဖအေ့အကြောင်းကို သိထားတော့ အံကလေး တင်းရင်း စိတ်မရှည်စွာနဲ့ပဲ စောင့်နေရပါတော့တယ်။
ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ ဖအေလုပ်တဲ့သူက မီးသုံးဖိုစလုံးကို သတ်လိုက်ပြီး ပထမအိုးထဲက မုန်လာဥတွေကို ဆယ်၊ ပန်းကန်တစ်ချပ်ထဲ ထည့်တယ်။ နောက်တစ်အိုးထဲက ကြက်ဥတွေကိုလည်း ဆယ်ပြီး တခြား ပန်းကန်တစ်လုံးထဲ ထည့်တယ်။ နောက်ဆုံးအိုးထဲက လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတွေကိုလည်း ပန်းကန်တစ်လုံးထဲ ထည့်တယ်။ ပြီးတော့မှ သမီးဘက် လှည့်တဲ့ပြီး မေးလိုက်တယ်။
“ကဲ… သမီးလေးရေ၊ ဒါတွေက ဘာတွေလဲ…”
“မုန်လာဥြုပတ်ရယ်၊ ကြက်ဥပြုတ်ရယ်၊ ရေနွေးကြမ်းရယ်ပါ ဖေဖေ”
သမီးက အဲလိုဖြေလိုက်တော့ ဖအေက သမီးကို သူ့နား လာခိုင်းပြီး မုန်လာဥတွေကို စမ်းခိုင်းတယ်။ သမီးက ဖအေခိုင်းတဲ့အတိုင်း မုန်လာဥပြုတ်တွေကို ဇွန်းနဲ့ ထိုးကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် “ဖေဖေ့ မုန်လာဥတွေကလည်း ပျော့ပြဲနေပြီ…”လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဖအေက သမီးစကားကို အမှုမထားဘဲ ကြက်ဥပြုတ်တစ်လုံးကို ယူပြီး သမီးကို ခွဲခိုင်းပြန်တယ်။ အပေါ်က အကာကို ခွာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကောင်းကောင်းကြီး ကျက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကြက်ဥပြုတ်ပေါ့။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ရေနွေးကြမ်းကို မြည်းကြည့်ဖို့ ဖအေက ခိုင်းလိုက်ပြန်တယ်။ သမီးလုပ်တဲ့သူက ပြုံးလိုက်မိရင်းကနေ ဖအေခိုင်းတဲ့ အတိုင်း အငွေ့ တထောင်းထောင်း ထနေတဲ့ ရေနွေးကြမ်းပူပူကို တဖူးဖူး မှုတ်လို့ မြည်းလိုက်ရပါတယ်။ အင်မတန် မွှေးပျံ့ပြီး အရသာရှိတဲ့ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ဖြစ်နေတာကိုလည်း သတိထားလိုက်မိတယ်။
လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကို အရသာခံရင်း သမီးက မအောင့်နိုင်တော့ဘဲ မေးလိုက်မိရပါတော့တယ်။
“မုန်လာဥရယ်၊ ကြက်ဥရယ်၊ လက်ဖက်ခြောက်ရယ်ဆိုတဲ့ မတူတဲ့ အရာသုံးမျိုးဟာ တူညီတဲ့ ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ ရေနွေးပူပူထဲမှာ တစ်ပြိုင်တည်း၊ တစ်ညီတည်း ထည့် အပြုတ်ခံခဲ့ရတာချင်းအတူတူ တုံ့ပြန်ပုံချင်းကျတော့ မတူဘူးလေ သမီးရဲ့။
“မုန်လာဥဟာ ရေနွေးပူထဲ မရောက်ခင်တုန်းကတော့ သန်သန်မာမာ၊ တောင့်တောင့်တင်းတင်းကြီးရယ်။ အဲ… ဒါပေမယ့် ရေနွေးနဲ့လည်း အပြုတ်ခံလိုက်ရရော တစ်ခါတည်းကို ပျော့ဖတ်ပြီး ချိနဲ့သွားတော့တာပဲ…
“ကြက်ဥကကျတော့ ရေနွေးထဲမရောက်ခင်က အထိမခံဘူး၊ ထိလိုက်တာနဲ့ ဖတ်ခနဲကွဲမှာ အသေအချာနော်။ အပေါ်ခွံပါးပါးလေးက အထဲက အရည်ကြည် ပျော့ဖတ်ဖတ်လေးတွေကို ကာရံထားရတဲ့ အနေအထားပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရေနွေးဆူဆူထဲမှာလည်း ကြာကြာလေးလည်း နေလိုက်ရရော အဲဒီ့ ပျော့အိအိအတွင်းသားတွေ အားလုံး မာကုန်တာပဲ မဟုတ်လား သမီးရဲ့…
“အေး… လက်ဖက်ခြောက်ကတော့ တစ်ဘာသာပဲ။ ရေနွေးပွက်ပွက်ထဲလည်း ရောက်သွားရော အဲဒီ့ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေကိုပါ လက်ဖက်ရည် အဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်…
“ကဲ… အဖေ့သမီးကရော ဘာလဲ၊ မုန်လာဥလား၊ ကြက်ဥလား၊ လက်ဖက်ခြောက်လား။ လောကဓံဆိုတာတော့ လူတိုင်း ရင်ဆိုင်ကြရတာပဲ သမီး။ အဲဒီ့ လောကဓံနဲ့ နဖူးတွေ့၊ ဒူးတွေ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ သမီးက ဘယ်လို တုံ့ပြန်လိုက်ချင်သလဲ။ မုန်လာဥလို တုံ့ပြန်မလား၊ ကြက်ဥလို တုံ့ပြန်မလား၊ လက်ဖက်ခြောက်လို တုံ့ပြန်မလား၊ သမီးဘာသာ စဉ်းစား ပေတော့ကွယ်…”
အပြင်ပန်းအမြင်မှာတော့ မုန်လာဥလို မာမာချာချာ တောင့်တောင့် တင်းတင်းကြီးနဲ့၊ လောကဓံနဲ့ တကယ်တမ်းရ င်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျရင်တော့ ပျော့ခွေ နွမ်းရိပြီး အားကုန်သွားမယ့် လူစားမျိုးပါလား။
ဒါမှမဟုတ် ကြက်ဥလို လူစားလား။ အစတုန်းကတော့ ထိလွယ်၊ ရှလွယ်တယ်၊ စိတ်ကလည်း ပျော့တယ်။ ဒါပေမယ့် သေခြင်းတရားလို၊ ရှင်ကွဲကွဲတာလို၊ ချွတ်ြုခံကျတာလို ကြမ္မာဆိုးတစ်ခုခုကို အပြင်းအထန် ခံစားရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ နင်လားဟဲ့… လောကဓံဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ ထီမထင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ မာကျောကျော၊ တောင့်တင်းတင်းကြီးဖြစ်သွားမယ့် လူစားမျိုးလား။ မပြုတ်ခင် ကြက်ဥနဲ့ ပြုတ်ပြီးသား ကြက်ဥလိုပဲ၊ အပြင်ပန်း အမြင်မှာ သိပ်မကွာလှပေမယ့် အတွင်းမှာ ခါးသီး မာကျောနေတဲ့ နှလုံးသားနဲ့ လူများ ဖြစ်နေမှာလား။
ဒါမှမဟုတ် စာဖတ်သူလူကြီးမင်းဟာ လက်ဖက်ခြောက်လို လူမျိုးလား။ ရေပူကိုပေမယ့် အသွင်ပြောင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိတာမျိုးလေ။ လက်ဖက်ခြောက် ဆိုတာက ရေနွေးဆူလေလေ၊ ပွက်လေလေ လက်ဖက်ရည် အရသာ ကောင်းလေလေပေါ့။ လက်ဖက်ခြောက်လိုလူဆိုတာကလည်း ဒုက္ခသုက္ခတွေ အရှိန်တက်လေ၊ အရည်အချင်းတွေ ပိုရှိလာလေဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပိုကောင်းတဲ့အခြေနေကို ဖန်တီးပေးနိုင်သူ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ကဲ… စာဖတ်သူလူကြီးမင်း၊ လောကဓံကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်မယ် စိတ်ကူးပါသလဲ။
စာဖတ်သူဟာ လူမုန်လာဥလား၊ လူကြက်ဥလား၊ လူလက်ဖက်ခြောက် လား?
(မှတ်ချက် – မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ စာတိုလေးမှာ လက်ဖက်ခြောက်နေရာမှာ ကော်ဖီ ဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာအများစု မျက်စိထဲ တန်းခနဲ မြင်လွယ်မယ့် ရေနွေးကြမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။)
This entry was posted in Reproduction, Translation, Uplifiting by lettwebaw. Bookmark the permalink.